Factory ngwaahịa | Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-ere ngwaahịa China
Ngwaahịa ndị isi bụ: 220kV na voltaji zinc oxide na-agba ọsọ, na-ekewapụ ọkụ, nkwụsịtụ nkwụsị, eriri ụgbọ ala ụgbọ ala, wụsara nkwalite, Ogwe ọkụ ọkụ n'ọbọ (igbe), mgbidi bushing, 110kV na nrụgide volta dị ala, Mkpuchi oyi zuru ezu. ma ọ bụ okpomọkụ shrinkable USB ngwa, 500kV na ala voltaji mejupụtara insulator wdg iche iche nke iche iche nke eletriki ngwaahịa.
High Quality Anya Power àmụmà Arrester
High Quality High voltaji Isolating Gbanye
High Quality erughị ala Polymer Suspension Insulator
Dropout Cutout High voltaji ogige fuuz
N'ogbe Chinese Product mejupụtara Cross Ogwe aka Insulator
Ngwongwo ihe eji eme ka ndi mmadu na-acho ogwu bu ihe eji emeputa eletriki na ihe ndi mejuputara. ọrụ nke obe - ogwe aka.Mgbe voltaji dị elu, achọrọ ịdị elu igwe nke insulator crossarm.
High voltaji Electric mejupụtara Nje pin Insulator
A insulator pin bụ akụrụngwa na-akwado ma ọ bụ kwụsịtụrụ a waya na-emepụta eletriki mkpuchi n'etiti ụlọ elu na waya.
High Protection Silicone Rubber Post Mejupụtara Insulator
Mejupụtara post insulator na-emi esịnede nke iko eriri epoxy resin ịbịaru mkpanaka, silicone roba nche anwụ uwe na gold oyiyi akwa.
A na - ejikarị insulators kwụsịtụrụ (dị ka akụkụ poselin, akụkụ iko) na ngwa igwe (dịka ụkwụ nchara, okpu ígwè, flanges, wdg) glued ma ọ bụ na-ejikọ igwe eji arụ ọrụ. Ha na-anọkarị na mkpuchi mkpuchi mpụ ma na-arụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ ikuku. ọdịiche.
Silicone Rubber transformer bushing jaket
Silicone Rubber Transformer bushing Transformer n'ọbọ a na-eji gbochie mmerụ ahụ nke ọhụụ nke isi kọntaktị eletriki kpatara. Ngwaahịa bụ nke sịntetik silicone roba sịntetik site na HTV vulcanization na nnukwu okpomọkụ. mee sịntetik silicone roba vulcanized na elu okpomọkụ Nwere ezi mkpuchi arụmọrụ, dielectric ike p / 20 MM, 1000 Ω mkpuchi mgbochi. Nzube nke ngwaahịa a bụ ihe ezi uche dị na ya, nrụnye ya dị mma, ihe mkpuchi ahụ bụ co ...
Okpomọkụ Shrinkable Bus-mmanya tube
Okpomọkụ na-eme ka ụgbọ okporo ígwè na-ekpo ọkụ Hegbọ mmiri na-eme ka ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ pụrụ iche, na-arụ ọrụ mkpuchi dị oke elu, nke a na-ejikarị eme ihe na ọdụ ụgbọ mmiri dị elu na ihe ndị ọzọ. 2: 1 3: 1 • Mwepu: Ngwa ngwa ngwa • Agba agba: acha ọbara ọbara, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, oji, ndị ọzọ nwere ike ịhazi • Ọnọdụ ọrụ na-aga n'ihu: -55 ℃ ~ 105 ℃ • opekempe mbido mbido: 80 ℃ • Opekempe comp ...
Tachi obi rụrụ arụ Shed Booster maka transformer ojii
Anagide rụrụ arụ Shed Booster maka transformer ọdụ Shed booster ike ga-eji na 30kv ~ 500kv switchgear, disconnector, post insulator, anya arrester na transformer mkpuchi maka ịba ụba leakage ụzọ na ime mmetọ eguzogide. The silicon roba wụsịrị booster nwere ike n'ọtụtụ ebe etinyere ọ bụla ebe poselin mkpuchi. Ọnụọgụ nke ọnụ ọgụgụ, ọdịdị na ọnọdụ ga-ekpebi na ntụle oke mmetọ saịtị maka mmetụta kachasị mma. Enwere ike ịgbaso ha na nnukwu elu iji ...
Dropout Cutout High Voltage Compound Fuse Dropout fuuz nwere ihe mkpuchi insulator na ọkpọkọ fuuz. Static kọntaktị na ofu na abụọ n'akụkụ nke insulator nkwado na-akpụ akpụ kọntaktị arụnyere na nsọtụ abụọ nke fuuz tube. Fuuz tube mejupụtara n'ime aak-anyụ tube, ná mpụga phenolic onyinye akwụkwọ tube ma ọ bụ epoxy iko tube.To jikọọ na-abata feeder nke nkesa edoghi ya tumadi echebe transformer ma ọ bụ edoghi si obere circuit na bufee, na on / anya loading ugbu a. W ...
China Manufacturer Economic Type Low Voltaji Switchgear Ọdụdọ Ike Nkesa Cabinet
China Manufacturer Economic Type Low Voltaji Switchgear Ọdụdọ Ike Nkesa Cabinet Gosipụtara ikike 100kVA; 200kVA; 400kVA Size 1350M * 700MM * 1200MM nwere ike ịbụ customizable Adabara gburugburu ebe obibi N'èzí Agba nwere ike ịbụ customizable Jiri Ọtụtụ ji na ike nkesa 1.Intelligent ala voltaji nkesa igbe adopts ukwuu ike, ukwuu pụrụ ịdabere na kọmputa motherboards, keukwu nlekota oru usoro parameters. 2. Mbelata ohere nke ike dis ...
High Quality High voltaji Isolating Gbanye zuru ezu na nkọwa, elu oru parameters dị elu, dịgasị iche iche. Ọzọ, obosara akporo nke ngwa, ọ ga-eji na elu okirikiri nhọrọ ukwuu. Ntinye ụzọ na-agbanwe agbanwe. Elu: 1000m ~ 3000m Ọnọdụ gburugburu ebe obibi: -30 ruo 40 ℃ (-40 ruo 40 ℃ na mpaghara oyi pụrụ iche) Ọsọ ikuku karịrị 700pa (Nke kwekọrọ na 34m / s) Ala ọma jijiji siri ike karịa 8 ogo. Ice mkpuchi ọkpụrụkpụ bụ karịa 10 mm Nwụnye ebe kwesịrị mba inflamma ...
A na-eji ikike dị elu na-enwu ọkụ ọkụ Arrester Zinc oxide compound n'ọbọ iji gbochie arrester arịrịọ nchekwa iji kwekọọ na klas ndị kwekọrọ na klas ndị ọzọ (AC) eletriki eletrik site na ngafe volta. Ihe nchebe ya dị mma nke ukwuu na mmetọ mmetọ pụtara ìhè yana olu ya pere mpe ma felata. Ebe ọ bụ na ihe ọkụkụ sitere na ihe ndị dị ka silicone roba na EP (epoxide), ọ nwere ike izere ụdị ihe ọghọm dị egwu, maka ...
Okpomọkụ na-ekpuchi mkpuchi mkpuchi bọs mmanya na nkwonkwo igbe MPH busbar nkwụsị igbe bụ nke polyolefin irradiation crosslinked hot shrinkage busbar nke a na-arụ site na ọnwụ. corrosion nke ụgbọ ala site acid, alkali, nnu na ọgwụ ndị ọzọ. 2. Kpochapu ihe di mkpụmkpụ nke oke, agwọ na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ kpatara. 3. Gbochie ihe ọghọm mberede nke ọdịiche dị ndụ ...